त्रृटिपूर्ण नेपालको नक्सा भएको संसदको लोगो कहिले फेर्छन् सांसदहरुले ? - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > त्रृटिपूर्ण नेपालको नक्सा भएको संसदको लोगो कहिले फेर्छन् सांसदहरुले ?
May 12, 2020 May 12, 2020 GRISHI131
काठमाडौं ।मुलुकमा प्रचलित नेपालको नक्सा त्रृटिपूर्ण रहेको तथ्य बाहिर आउँदा पनि यसलाई सच्याइएको छैन । जस कारण प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि विद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत मुलुकको त्रृटिपूर्ण नक्सा राखिएको छ । जसले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति उपहास गरेको छ ।
जनताका प्रतिनिधि तथा कानुन निर्माता सांसदहरुले पनि सोही त्रुटिपूर्ण मुलुकको नक्सा भएको लोगो लगाइरहेका छन् । जब भारतले सीमा मिच्दा संसद र सडकमा कुर्लिने सांसदहरुले आफ्नै छातिमा लगाएको त्रुटिपूर्ण मुलुकको नक्सा भएको संघीय संसदको लोगो परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् ।
मुलुकको पूरै भूभाग नसमेटिएको नक्सालाई वर्षाैंदेखि प्रचलनमा ल्याएको प्रत्येक सरकार र सरकार चलाउने दल तथा तिनका नेताहरुलाई भारतले सीमा मिचेर नेपाली भूमिमा बाटो बनाएपछि मात्रै आँखा खुलेको छ । र पनि सरकारले त्यस त्रृटिपूर्ण नक्सालाई सच्याएर नयाँ प्रकाशित गर्दै प्रचलनमा ल्याएको छैन ।
भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गरेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा नेपालले आफ्नो नक्सामा नसमेटेको दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नक्सा सार्वजनिक गरेको केही महिनामै नेपालको अतिक्रमित भूभागमा भारतले तिब्बतको कैलाश मानसरोवर जाने बाटो बनाएको छ । यसको अहिले नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
कानुन निर्माता र व्यवस्थापिकाको जिम्मेवारी पाएका सांसदहरुले त्रृटिपूर्ण मुलुकको नक्सा भएको संघीय संसदको लोगो कहिले परिवर्तन गर्छन् ? तत्काल उनीहरुले यो लोगो परिवर्तन गर्ने सम्भावना रहेको देखिँदैन । सरकारले नेपालको नक्सा परिवर्तन नगरेसम्म संसद सचिवालयले पनि लोगोमा नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न नसक्ने सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले क्यानडानेपाललाई जानकारी दिए । उनकाअनुसार सरकारले नेपालको नक्सा परिवर्तन गरेपछि मात्रै संसदको लोगोमा नेपालको नक्सा परिवर्तन हुनेछ ।
यता सांसद नवराज सिलवालले संघीय संसदको लोगो परिवर्तन गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिए । संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।